Izinhlelo zokusebenza ezihamba phambili zeviki | Izindaba Zegajethi
Izindaba zamagajethi | 26/10/2021 19:29 | Isithombe
Izithombe seziyindlela engcono kakhulu yokwenza uhambo olungafi, ukudla komndeni, izinsuku zokuzalwa, amaphathi, ukonga isikhathi kuze kube phakade. Ngenxa yentuthuko yobuchwepheshe, kungenzeka ukuthuthukisa izithombe ngokushesha futhi kalula. Namuhla sizokukhombisa i- izinhlelo zokusebenza ezinhle kakhulu zokuphrinta izinkumbulo ezinhle kakhulu, futhi usekhaya ngesicelo esisodwa nje.
1 Izinhlelo zokusebenza zaleli sonto
1.2 Ungalusebenzisa kanjani uhlelo lokusebenza lwe-Hofmann?
1.4 Imibhalo evamile
Izinhlelo zokusebenza zaleli sonto
Inkampani ekwazile ukuba ngomunye we abaholi bemakethe, kusukela ngo-1923 ibilokhu isungula futhi izisungula kabusha. Umdali kaHofmann wayengumJalimane owabalekela eValencia ngo-1923, ekhuthaza ibhizinisi lokuthatha izithombe, eqala ukudala ama-albhamu endabuko, kwakungeke kuze kube ngu-2005 lapho beqala ngesipiliyoni sedijithali, okuvumela ukukhiqizwa kwama-albhamu edijithali. Njengamanje imboni isaqhubeka e-Valencia futhi isaqhubeka nokubheja kwezobuchwepheshe nezithombe ukuze uHofmann aqhubeke nokuba ngumholi emikhiqizweni yezithombe.
U-Hofmann akakayeki ukusungula izinto ezintsha, okwamanje uhlinzeka ngemikhiqizo eyeqa ukuthwebula izithombe kwendabuko. Ngale ndlela, noma yimuphi umkhiqizo ungenziwa ngezifiso ngokuchofoza okumbalwa nje: izinkomishi, amaphosta, izindida, imidwebo. ama-cushions ekhwalithi ephezulu, amakhava nama-albhamu edijithali. Ngo-2013 uhlelo lokusebenza lweselula lwafika emakethe lokho kukuvumela ukuthi udale inkumbulo yoqobo ngendlela ekhululekile nelula. Kufanele nje ukhethe isithombe kanye nomkhiqizo ofuna ukuwenza. Eminyakeni yamuva, ama-cushions abe omunye wemikhiqizo ethandwa kakhulu.
Ungalusebenzisa kanjani uhlelo lokusebenza lwe-Hofmann?
I-Hofmann iyatholakala kokubili enguqulweni yayo ye-Android kanye ne-Apple. Akulona uhlelo lokusebenza olunesisindo esiningi kakhulu, oluvumela ukuthi ilandwe kunoma iyiphi idivayisi. Isicelo ikuvumela ukuba ukuphrinta kwesithombe, dala i-albhamu, dweba ikhalenda, yenza inkomishi ibe ngeyakho. Akudingekile ukufinyelela iwebhu kusuka kuselula, konke kungenziwa, ngaleyo ndlela kuthuthukiswe kakhulu ulwazi lomsebenzisi nokukhuthaza ukunethezeka ngaso sonke isikhathi. Ingenye ye izinhlelo zokusebenza ezilandwe kakhulu eSpain futhi inayo yonke imikhiqizo engatholakala kuwebhu. Ayikho imikhawulo, dala futhi uklame noma nini lapho uyidinga futhi wenze izinkumbulo zakho zibe into ekhumbulekayo.
Eminyakeni yamuva, uHofmann uphinde wahlanganisa a isigaba sezipho okuvumela amakhasimende ukuthi akhethe inombolo enkulu yemikhiqizo eyenziwe ngokwezifiso: imidlalo yetafula, amathawula, izikhwama zasendlini yangasese, ama-backpacks ... Le nkampani ikwazile ukunikeza imikhiqizo eminingi evumelana nesipho samanje. Ngaphezu kwalokho, banezigaba ezintathu zokukhuthaza abangazinikeza ngezinsuku zokuzalwa, imishado noma abangani. Umgomo uwukuba umsebenzisi athole isipho esiphelele.
La Uhlelo lokusebenza lwe-Hofmann ine interface elula kakhulu futhi enhle. Kulula ukuzulazula futhi inembile kakhulu, umkhiqizo ngamunye utholakala kalula futhi ukuzulazula kuhlangabezana nazo zonke izidingo ukuze umsebenzisi angalahleki esinyathelweni ngasinye. Ngaphezu kwalokho, ungaqiniseka ukuthi uHofmann unekhwalithi enhle yokuphrinta ezithombeni zakhe, ngakho-ke ngeke ube nezinkinga. Uzojabula ngomkhiqizo owucelayo, uHofmann ufana nekhwalithi enhle nomsebenzi omuhle.
Hofmann - Ama-albhamu Ezithombe
I-Cheerz ingenye yezinkampani ezihamba phambili, eminyakeni yamuva ithole ubukhona obuncane emakethe yayo ukusebenzisana okukhulu nabathonya. Imboni yayo itholakala eParis. Yazalwa ngo-2012 futhi kusukela lapho ayizange iyeke ukudala nokusungula izinto ezintsha, ukubheja eqenjini elincane elifuna ukuthatha umhlaba. Ungomunye wezimbangi zikaHofmann futhi ulandela eduze ezinyathelweni zakhe. I-Cheerz iphinde iveze inani elikhulu lemikhiqizo ethokozisayo: izithombe, ama-albhamu, amabhokisi ezithombe, odonsa bekuyimikhiqizo yayo yenkanyezi kanye namakhalenda.
Onyakeni odlule bashintshe imibala yabo yokubheja kokuluhlaza okwesibhakabhaka nokuphuzi futhi bashintsha isithombe somkhiqizo wabo. Futhi banohlelo lokusebenza lweselula oluvumelana nanoma iyiphi idivayisi futhi oluvumelayo thenga imikhiqizo yakho kalula futhi kalula. Kulula ukuyisebenzisa nokufinyelela njengakuwebhusayithi yakho, okukuvumela ukuthi uphrinte zonke izithombe ozidingayo kuselula yakho futhi udale umkhiqizo oyingqayizivele. Zama uhlelo lokusebenza futhi uzibonele yonke imikhiqizo enayo kanye nekhwalithi yayo ephezulu.
I-Freeprints itholakala eTexas, kodwa ixhumeke emazweni amaningi emhlabeni jikelele. Inohlelo lokusebenza olulula nolusebenziseka kalula, oluvumelayo phrinta noma yisiphi isithombe kuselula. Ngenye yezinkampani eziba nekhono likaHofmann, ikuvumela ukuthi uphrinte izithombe ezingama-45 mahhala nyanga zonke, kufanele nje ukhokhele izinto zokuhamba. Sekukonke kunezithombe zamahhala ezingu-500 unyaka wonke.
Landa lezi zinhlelo zokusebenza bese uzama ukuthi iyiphi evumelana kangcono nezidingo zakho, ube nayo uhlelo lokusebenza lweselula kwenza inqubo yokuphrinta ishesha kakhulu. Sibuyela kokulandelayo nezindaba ezengeziwe. UKhisimusi ususondele, usengathola isipho esiphelele.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Isithombe nomsindo » Isithombe » Izinhlelo zokusebenza ezihamba phambili zeviki
Ugreen, izesekeli ezihlukahlukene zamadivayisi ethu